We She Me: သားဆု ပန်လေသောအခါ
nu-san - 8/26/07, 7:45 PM
တုန်တုန်တို့ မေမေ ခေါင်းမှာ ပန်းအဖြူပန်လာတဲ့ပုံလေးကို စာဖတ်ရင်း အမလည်း မျက်လုံးထဲ မြင်ပြီး ရီချင်လာတယ်။ ကဲ..ကဲ.. နောက်တစ်ယောက်ဆိုရင် ယောင်္ကျားလေး ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်.. သမီးတုန်ပြီးရင် သားတုန်ပေါ့.. :) ဟုတ်လား..
Anonymous - 8/26/07, 10:46 PM
အဟီ ကိုအန်ဒီရေ ဖတ်လို့ကောင်းပ ။ မ nu-san ပြောသလို ၊ အမ ပန်းအဖြူပန်လာတဲ့ပုံစဉ်းစားပြီး တခွိခွိ ရီနေတယ် အဟီးးး ။
မိန်းကလေး သမီးအကြီး ရတာ.. မိဘကို ပြန်စောင့်ရှောက်တတ်ကြပါတယ် ။ အငယ်မောင်လေးကိုလည်း ပြန်ကြည့်တတ်တယ် ။ ဂျစ်တူးဆိုတာ နမူနာပါ အဟား.. ဒါက ကိုယ့်ဘာသာ ဘလိုင်းကြီး ကိုယ်ရည်သွေးတာ ။
ဖြေး၂မှန်၂နဲ့ အောင်ပွဲဝင်တတ်တဲ့ X-team က စတင်တာဆိုတော့ ၊ မိန်းကလေးတွေဟာ ဘ၀မှာလည်း ဖြေး၂မှန်၂လေးနဲ့ လိုရာရောက်တတ်ကြပါတယ် ။ သမီးတုန်လေးလည်း အဲလို ရောက်လာမယ့် နောက်အနှစ် ၂၀ကြာတဲ့ နေ့တစ်နေ့ကို ဒီပို့စ်နဲ့အတူ မျှော်လင့်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
pandora - 8/26/07, 11:53 PM
Andy Myint - 8/27/07, 5:24 PM
ဟုတ်တယ်… ယတြာ ချေတယ်မျိုးဆိုတော့လည်း နည်းနည်းတော့ ဆန်းတာပေါ့။ ဒီလိုပဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ လုပ်လိုက်ကြတယ်။ သားလေး နောက်တစ်ယောက် ထပ်မွေးနိုင်ပြီး သမီးလေးကလည်း ဂျစ်တူးလိုမျိုး အစ်မကြီး ဖြစ်ရင်ကောင်းတာပေါ့…ဟဲဟဲ။ မှတ်သွားတဲ့သူတွေလည်း Try နိုင်ကြပါစေလို့… ဟဲဟဲ။
သားလေး လိုချင်တဲ့ သူများတော့ ရက် နည်းနည်း နောက်ကျပါစေ။ တစ်စက်ဝန်းမှာတော့ တစ်ခါပဲ Try ။ Y Team က ရှားတယ်။ (အတွေ့အကြုံအရ ပြောတာနော်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဆရာဝန်နဲ့ Consult လုပ်ပါ။)
Layma - 8/27/07, 10:35 PM
တန်ဖိုးရှိတဲ့ အတွေ့ အကြုံကို မျှဝေပေးထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်….
Anonymous - 8/27/07, 11:03 PM
ဟိုက် လေးမတွက် တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုပါလား.. လေးမရယ်.. ဒါတွေမစဉ်းစားနဲ့ဦးလေ တမီး .. ငယ်၂လေး ရှိသေး.. တီတီဂျစ်က ချေတနာနဲ့ တမီးကို တတိပေးတာ အဟီးး ။
Phyo Wai Kyaw - 8/28/07, 4:32 PM
AKM, အခုထက် နည်းနည်းလေး ထပ်ပြီး ထဲထဲဝင်ဝင်လေးတွေ ရေးပါလား... :))
Andy Myint - 8/28/07, 7:38 PM
ဖတ်ချင်ရင် IC (ID) အရင် ပြပါ… Rated – M (Mature Audience Only) ဗျ